Kasteelhoeve & 't Knechthuys - I-Airbnb
Baarlo, Limburg, i-Netherlands
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Renée
Jabulela ukunethezeka kule ndawo yomlando eyingqayizivele enhliziyweni yesigodlo saseBaarlo. Ipulazi le-castle litholakala epaki lesikhumbuzo futhi lizungezwe umsele walo we-castle. Ungakwazi ukuphumula ngokuphelele endlini evulekile kanye nengadi yangasese. Jabulela isidlo sakusihlwa esimnandi ethaleni likanokusho noma uphumule ngemuva kwengadi ngengilazi emnandi yewayini.
Jabulela imvelo, ukuthula nenkululeko kuleli khaya lamaholide elifakwe kahle.
Indlu inamakamelo okulala ayi-5 abanzi wonke afakwe umbhede we-spring box.
Kunamagumbi okugezela amathathu aneshawa yemvula kanye/noma okugeza. Lapho ufika uzothola imibhede yenziwe futhi iholide lakho elikufanele lingaqala ngaso leso sikhathi!
Ekhishini elibanzi ungakwazi ukuzitika nge-delicacy culinary. Ngenkathi upheka, ungajabulela ukubuka phezu komsele kanye nedlelo lezinyamazane. Thela ingilazi yewayini bese uphuza ngenkathi upheka etafuleni eliphezulu.
Ungadla etafuleni elikhulu lezwe egumbini lokudlela elihlala abantu abayi-10.
Ikhishi lihlome ngokuphelele ngomshini wokuwasha izitsha, ihhavini, isiqandisi, umenzi wekhofi, umshini weNespresso, iketela nakho konke okudingayo ukuze upheke ukudla okumnandi.
Indawo yokuhlala evulekile ikumema ukuthi ukhululeke ngokuphelele. Ngenkathi ulalele umculo othile, ungajabulela ukubuka engadini evulekile. Hlala engadini yenqaba! Ingadi yangasese engekho ngaphansi kuka-1000m2 inethala likanokusho elinophahla olubanzi. Lapha ungakwazi ukujabulela isitofu esithokomele esokubaswa ngokhuni futhi usebenzise i-Boretti Barbecue ewubukhazikhazi.
Yebo kukhona umshini wokuwasha nokomisa okutholakalayo ongakusebenzisa.
ubusuku obungu-7 e- Baarlo
I-Baarlo itholakala enkabeni yeNorth Limburg phakathi kweMaas kanye neGroote Peel nature reserve. Kunenqwaba yemizila yamabhayisikili nokuhamba ngezinyawo endaweni kanye namathuba angapheli ohambo. Isibonelo, ungaya uyothenga ku-Designer outlet Center noma uvakashele ipaki yokuzijabulisa. Ngaphezu kwalokho, amadolobha afana neDusseldorf, Maastricht, Eindhoven, Nijmegen, Essen neVenlo alungele usuku lokuthenga.
Hlola ezinye izinketho ezise- Baarlo namaphethelo